Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Warshada Kit-Cuntada oo cirka isku shareertay balaayiinkii
Sannadka 2020, macaamiil ka badan sidii hore ayaa go'aansaday inay ka dalbadaan xirmooyinka cuntada iyo cuntooyinka kale iyo alaabta cabitaanka onlayn si ay uga fogaadaan wax iibsiga ee dukaamada dadku ku badan yahay, halkaas oo laga yaabo inay ku faafaan fayraska COVID-19.
Kobaca ayaa sii socday ilaa 2021 iyadoo macaamiishu ay eegeen xirmooyinka cuntada iyo ganacsiga e-commerce si ay u noqdaan beddel ku habboon dukaamaysiga caadiga ah iyo qorsheynta cuntada. Isniintii, Kroger wuxuu ku dhawaaqay in xirmada cuntada iyo ganacsiga cuntada ee loo diyaariyey Home Chef ay kor u dhaaftay $1 bilyan iibka sanadlaha ah iyada oo macaamiishu ay raadiyeen xalal cunto oo ku habboon inta lagu jiro aafada.
Sida laga soo xigtay falanqeeyaha Xaqiiqooyinka Xidhmada Cara Rasch, warkan ku saabsan Chef-ga Guriga maaha wax la yaab leh. "Sida shirkadaha kale ee xirmooyinka cuntada, Chef Home wuxuu la kulmay guulo iib oo xoog leh intii lagu jiray cudurka faafa iyadoo dadku ay waqti badan ku qaateen guriga oo ay raadiyeen noocyo kala duwan waqtiga cashada. Sida mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha suuqa xidhmada cuntada, Chef Home wuxuu ka faa'iidaystay isbeddellada macaamilka ee cunto karinta iyo wax badan oo guriga lagu cuno si uu u gaadho heerka kobaca 118% ee sannad-maaliyadeedka 2020.
Xaqiiqooyinka Baakadeysan 'June 2021 Sahanka Macaamiisha khadka tooska ah ee Qaranka ayaa ogaadey in kuwa adeegsada adeegyada gaarsiinta xirmada cunnada, sababaha ugu sarreeya ee sidaas loo sameeyo ay tahay ku habboonaanta, jecel in cunto loo qorsheeyo, iyo isku dayga wax cusub/beddel cunto. Tiro badan oo ka mid ah isticmaalayaasha xirmooyinka cunnada ayaa sidoo kale ka warbixiya inay isticmaalaan xirmooyinka cuntada sababtoo ah alaabooyinkan waxay u badbaadiyaan waqtigooda diyaarinta cuntada.
Rasch wuxuu xusay, "Qalabka cuntadu waxay u taagan yihiin soo jeedin qiimo leh oo loogu talagalay macaamiisha buka qorsheynta cuntada ama dukaamada raashinka ee weli doonaya cunto karsan guriga, maadaama ay yareeyaan wakhtiga ay ku raadiyaan cuntooyinka iyo gadashada maaddooyinka."
Rasch ayaa sii wadata, “Daalka faafa ee 2020 iyo 2021 ayaa horseeday in dad badan ay raadiyaan xulashooyin cusub si ay cunto miiska u saaraan. Xirmooyinka cuntadu waa kuwo soo jiidasho leh macaamiishan sababtoo ah waxay yareeyaan wakhtiga lagu qaato qorsheynta cuntada iyo wax iibsiga. Waxay sidoo kale baabi'iyaan qashinka cuntada, maadaama dhammaan cuntooyinka ay ka kooban yihiin maaddooyin si dhammaystiran loo qaybiyay oo loogu talagalay cunto kariye gaar ah."
Intaa waxaa dheer, Rasch wuxuu tilmaamay in xirmooyinka cunnada ay ka caawiyeen qaar ka mid ah macaamiisha inay wanaajiyaan xirfadahooda cunto karinta inta lagu jiro aafada iyadoo caadooyinka cuntada ay u guureen guriga. "Kuwa aan lahayn xirfado wax-karis oo badan, xirmooyinka cuntadu waxay u ahaayeen naf-badbaadiye si ay u baraan inay wax ku karsadaan cuntooyin fudud, tallaabo-tallaabo ah maadaama ay heleen baahi badan ama rabitaan ah inay wax ku karsadaan guriga."
Si kastaba ha ahaatee, adeeg bixinta xidhmada cuntadu waa mid aad u wanaagsan. Xaqiiqooyinka Baakadeysan 'June 2021 Sahanka Macaamiisha khadka tooska ah ee Qaranka ayaa ogaatay in kaliya 11% macaamiisha ay ka warbixiyaan isticmaalka adeega bixinta xirmada cuntada 12kii bilood ee la soo dhaafay.
Dalxiiska Sandals-ka Hadda U Dabaaldegaya Golf-ka iyo Isboortiga ugu Fiican...
Jamaica waxay soo dhaweysay Duulimaadyo Cusub oo ka yimid German Airline...
Xumaan mise Wacan? Liiska kee ayaa hadda soo degi doona tafaariiqleyaasha?
Raiisel wasaaraha Faransiiska ayaa la karantiilay kadib markii la tijaabiyay...
Duulimaadyada garoonka diyaaradaha ee Sheremetyevo ee Moscow ee Qatar Airways…
Shuruudaha Tallaalka Cusub ee Kanada
Dawooyinka Kansarka ee cusub ee Zantrene waxay ka ilaalisaa wadnaha dhimashada
Acura Integra cusub: geesinimo iyo Turbo ayaa lagu dacweeyay 2023
Koonfur Afrika oo ka jawaabtay safarka cusub ee lagu soo rogay...